यी 1080p होम क्यामेरा समीक्षा, सर्भेलांस क्यामेरा तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | ग्याजेटहरू, घर, समीक्षा, क्यामकॉर्डरहरू
केहि दिनको लागि हामी YI परिवार बाट अर्को उत्पादन को प्रयास गर्न को लागी भाग्यशाली छौं। एक सियाओमीको आफ्नै ब्रान्ड जुन यसका सबै ढाँचाहरूमा रेकर्डि toसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको विकासको लागि जिम्मेवार छ। यो समय हामी बारे मा कुरा YI 1080p होम क्यामेरा.
हामी यसबाट धेरै परम्परागत वेबक्यामको सामना गरिरहेका छैनौं। यी होम क्यामेरा छ वाईफाई कनेक्टिविटी र १p०p रिजोलुसन। एक गौण कि हामीलाई उपयोगिताहरूको एक ठूलो संख्या प्रदान गर्दछ। यदि तपाई यी होम क्यामेराको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने पढ्न जारी राख्नुहोस्।
1 यी होम क्यामेरा, एक क्यामेरा, धेरै संभावनाहरू
2 यी होम क्यामेरा अनबक्सिंग
3 न्यूनतम र कार्यात्मक डिजाइन
4 यी होम क्यामेरा सुविधाहरू
5 वास्तविक-समय भिडियो वा छवि रेकर्डि।
6 यी होम क्यामेराको लागि आफ्नै अनुप्रयोग
7 यी होम क्यामेराको पेशेवर र विपक्ष
यी होम क्यामेरा, एक क्यामेरा, धेरै संभावनाहरू
हामीले यसको बाकसबाट क्यामेरा हटाउँदा केही बाहिर छ यसको सामग्रीको गुणस्तर र यसको उत्कृष्ट समाप्तहरू। एक उत्पादन जुन आँखा र टचमा गुणस्तरीय हुन्छ। हामी भाग्यशाली छौं अन्य यी यी आफ्नै उत्पादहरु कोशिस गर्न, र हामी भन्न सक्छौं पूर्ण रूपमा एक उच्च गुणस्तर पूरा. यहाँ तपाईं अमेजनमा यी होम क्यामेरा किन्न सक्नुहुन्छ नि: शुल्क शिपिंगको साथ।
कल्पितसुरुमा एक निगरानी क्यामेरा को रूप मा सुविधाहरू दिए जुन यो सुसज्जित छ। जस मध्ये हामी ती विस्तार गर्न सक्छौं रात दर्शन वा आवाज पत्ता लगाउने। तर के भिडियो सम्मेलनको लागि अचम्मको साथ भेट्छ 1080p छवि गुणवत्ता र धन्यवाद दुई-मार्ग अडियो। सुविधाहरू जुन हामी तल विस्तारमा कुरा गर्ने छौं।
यी होम क्यामेराको शारीरिक उपस्थिति ध्यान नदिई जान्छ। तिनीहरूको वक्र रेखा र रंग र सामग्री को छनोट वास्तव मा उत्कृष्ट छ। एउटा ग्याजेट जुन कुनै कुनामा टुक्रिने छैन, र त्यो बदलामा ध्यान नदिइनेछ। एक शरीर र म्याट सेतो र in्गमा प्रतिरोधी प्लास्टिकबाट बनेको आधार, कता गोलाकार मोड्युल चमकदार कालो मा जहाँ लेन्स स्थित छ।
यी होम क्यामेरा अनबक्सिंग
यो बक्स भित्र हेर्ने र तपाईंलाई भेट्टाएको सबै कुरा बताउने समय हो। पहिलो उदाहरणमा, क्यामेरा आफैंमाजुन हामी भन्छौं, आँखा र स्पर्श गर्न धेरै रमाइलो छ। थप रूपमा, हामीसँग छ USB लाई माइक्रो USB ढाँचा केबल। र द लोड ट्रान्सफार्मर, यस्तो चीज जुन सबै निर्माताहरूले बक्समा समावेश गर्दैन।
Wi-Fi जडान, यसको केबल र चार्ज कनेक्टर को लागी धन्यवाद, यी होम क्यामेरा कुनै पनि कम्प्युटरमा जडान हुन आवश्यक छैन। हामी यसलाई जहाँसुकै वाइफाइ सिग्नल पहुँच गर्न सक्दछौं। एक केबल जसले तपाईंको स्थान अझै सीमित गर्न सक्दछ सकेटको नजिक
थप रूपमा, बक्समा हामी एक फेला पार्दछौं पूर्ण गाइड कि स्पेनिश मा एक खण्ड शामिल हैं। वारेन्टी कागजात, स्टिकर र एउटा सानो उपहार प्रमोशनल यो क्यामेरा खरीद गर्दा, यी हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ QR कोड ढाँचामा एक प्रमोशनल कोड जुन हामी 33 XNUMX% छुट पाउनेछौं रेकर्डि and र ईन्क्रिप्शन भण्डारण सेवाहरूमा यी क्लाउडमा.
न्यूनतम र कार्यात्मक डिजाइन
जैसा कि हामी तपाईंलाई भनिरहेका छौं, यी होम क्यामेराको डिजाइन, हामी यसलाई मन पराउँदछौं। हामीले छोडेको केहि पनि भेट्टाउँदैनौं, र हामीले केही पनि पनि याद गर्दैनौं। को क्यामेरा बडी र बेस आफै एकदम पातलो छ। विस्तार गर्नुहोस् कि यसलाई बनाउनुहोस् धेरै हल्का तौलका साथै धेरै विवेकी बल्कियर क्यामेराको तुलनामा।
यसको आधारमा यो छ घुमाइराखेको काज (पछाडि र पछाडि) सजिलोसँग १ degrees० डिग्री भन्दा पर। त्यसैले हामी यसलाई यसको आधारमा खडा, वा आवश्यक भएमा भित्तामा वा अन्य कुनै अनियमित सतहमा राख्न सक्छौं। यो गर्नका लागि तल यसको आधार गैर पर्ची रबर संग कभर गरिएको छ.
मा पछाडि हामी एउटा मोड्युल फेला पार्दछौं, कालोमा पनि, जहाँ पावर आउटलेट। हामी कुनै पनि केबल ढाँचा संग जडान गर्न सक्छौं माइक्रो यूएसबी। हामी एक विवरण पनि भेट्टाउछौं जसले यी होम क्यामेराले यसको संभावनाहरू विस्तार गर्दछ;aमाइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड स्लट। र द बटन रिसेट गर्नुहोस् कुनै पनि सेटिंग्स हटाउन को लागी।
यहाँ अमेजनमा यी होम क्यामेरा खरीद गर्नुहोस् नि: शुल्क शिपिंग र १०% छुट सहित।
यी होम क्यामेरा सुविधाहरू
यी होम क्यामेराको शारीरिक विशेषताहरु यो बनाउँछ घर भित्र प्रयोगको लागि क्यामेरा। यद्यपि यसको Wi-Fi जडानको लागि धन्यवाद हामी यसलाई हामी जहाँसुकै पाउन सक्दछौं हामीसँग पावर आउटलेट छ। यो "ढोका बाहिर" प्रयोगको सामना गर्न तयार छैन। अझै, यो संग सुसज्जित छ एक बाहिरी निगरानी क्यामेरा जस्तै सुविधाहरू.
छ रातको दर्शन गैर आक्रमणकर्ता यसको मतलव तपाईले कुनै पनि बत्तीहरू "देख्न" खोल्न आवश्यक पर्दैन त्यसैले अन्धकारमा चम्किलो वा अनावश्यक प्रकाशले तपाईलाई दु: ख दिनुहुन्न। को इन्फ्रारेड टेक्नोलोजी हामीलाई स्थापना भएको ठाउँमा पूर्ण छविहरू पूर्ण अन्धकारमा प्राप्त गर्दछ।
अतिरिक्त को एक अर्को, जो यसको संभावनाहरु लाई विस्तार छ गति पत्ता लगाउने। क्यामेरा निष्क्रिय हुन सक्छ र स्वत: सक्रिय हुन्छ जब यसको सेन्सर गति पत्ता लगाउँछ। र तिनीहरू हुनेछन् समान जब कुनै आवाज / आवाज पत्ता लाग्यो। यसको लागि धन्यबाद हामी यसलाई घर निगरानीको लागि वा बच्चा मोनिटरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
तपाईको सफ्टवेयरले प्रस्ताव गरेको विकल्पलाई धन्यवाद हामी अनुप्रयोगको माध्यमबाट सतर्कताहरू मार्फत यस समयमा सूचनाहरू प्राप्त गर्न बीच छनौट गर्न सक्दछौं। वा हामी यसलाई कन्फिगर गर्न सक्दछौं कि, यदि क्यामेरा चाल वा आवाज द्वारा सक्रिय छ भने, हामी एक सूचना ईमेल प्राप्त गर्दछौं। केवल पावर केबल र Wi-Fi जडानको साथ, हामी शान्तपूर्वक घर छोड्न सक्छौं यी होम क्यामेरा द्वारा प्रस्तावित अविरल निगरानीको लागि धन्यवाद।
वास्तविक-समय भिडियो वा छवि रेकर्डि।
हामी संग छ बिभिन्न उपयोग विकल्पहरू यी होम क्यामेराको लागि। यसको Wi-Fi जडान र एक पूर्ण अनुप्रयोग जुन हामी कुरा गर्नेछौं, बनाउँदछौं हामी जहाँसुकैबाट वास्तविक समयमा छविहरू पहुँच गर्न सक्दछौं। साथै, हामी क्यामेरा मार्फत कुराकानी गर्न सक्छौं र जहाँसुकैबाट पनि यसको द्विदिशात्मक ध्वनिलाई धन्यवाद। यसको लागि हामीसँग छ स्पिकर र माइक्रोफोन, केहि छैन जुन सबैमा छैन।
यदि हामीलाई चाहिएको छ भने छवि रेकर्डि।, यी होम क्यामेरा पनि यसको लागी आदर्श छ। हामी भेट्छौं दुई सम्भाव्यता छवि रेकर्डि .का लागि। हामी तपाईंको स्लट गर्न सक्दछौं माइक्रो एसडी छविहरू भण्डारण गर्न। वा हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौं क्लाउड भण्डारण प्रणाली सेवाले हामीलाई के प्रदान गर्दछ यी क्लाउड.
Su चौडा कोण लेन्स हामीलाई आश्वासन दिन्छ कि एक राम्रो स्थान को निगरानी को लागी, हामी कोठा वा परिसर पूरै कवर गर्न सक्छौं। र सँग छविहरू रेकर्ड गरिएको छ 1080 HD गुणवत्ता यसलाई एक असाधारण निगरानी उपकरण बनाउनुहोस्। र सबैभन्दा माथि, सबै जेबको पहुँच भित्र। राम्रो सुरक्षा प्रणालीको लागि भाग्य खर्च गर्नु पर्दैन, यहाँ तपाईं अमेजनमा तपाईंको यी होम क्यामेरा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ शिपिंग शुल्क बिना।
यी होम क्यामेराको लागि आफ्नै अनुप्रयोग
विकासकर्ता: कामी दृष्टि
यो एक संगत अनुप्रयोगको साथ एक उपकरण प्रयोग गर्न वा यो हामी प्रयोग ग्याजेट को लागी र डिजाईन गरीएको एक अनुप्रयोगको साथ प्रयोगको साथ लिनु हुँदैन। प्रयोगकर्ता अनुभव पूरा छ र सबै सन्तोषजनक माथि छ, र हामीलाई बनाउँछ सबै फाइदाहरूको फाइदा लिनुहोस् त्यो प्रस्ताव गर्दछ।
सबै YI उत्पादनहरू जस्तै जुन हामी परीक्षणको लागि भाग्यशाली छौं, YI होम क्यामेराको आफ्नै अनुप्रयोग पनि छ। यस केसमा, यो उही अनुप्रयोग हो जुन व्यावहारिक रूपमा क्यामेराको सम्पूर्ण दायराको लागि लक्षित छ जुन यस निर्माताले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ। र यो भिन्नता र गुणको एक बिन्दु हो जुन यसलाई बाँकीबाट फरक गर्न प्रबन्ध गर्दछ।
यदि हामी एन्ड्रोइड उपकरणहरू र आईओएसको लागि उपयुक्त, एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छौं भने, हामी तुरून्त क्यामेरा प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामीले भर्खरको क्यामेरालाई जडान गर्नुपर्नेछ, र ती उज्यालो हुनेछ। लाउडस्पीकरमार्फत हामी एउटा आवाज सुन्नेछौं जुन (अ in्ग्रेजीमा) जडानको लागि प्रतिक्षा गर्दैछ र त्यो हो जब हामीले जडानमा अगाडि बढ्नुपर्दछ।
हाम्रो वाईफाई नेटवर्कमा तिनीहरूलाई जडान गर्न, अनुप्रयोग आफैंले QR कोड उत्पन्न गर्दछ कि हामीले क्यामेराको अगाडि राख्नु पर्छ ताकि तिनीहरूले यसलाई पढे। एक पटक मान्यता प्राप्त कोड, क्यामेराहरू स्वचालित रूपमा हाम्रो नेटवर्कमा जडान हुन्छ। र यस क्षणमा हामी वास्तविक समयमा देख्न सक्छौं, अनुप्रयोग मार्फत, सबै क्यामेरा रेकर्डिंग छ, धेरै सजिलो!
विकासकर्ता: YI टेक्नोलोजीहरू, Inc.
यी होम क्यामेराको पेशेवर र विपक्ष
हामी वास्तवमै तपाईंको मनपराउँदछौं न्यूनतम, कार्यात्मक र धेरै आधुनिक डिजाइन त्यो घरको कुनै पनि कुनामा फिट हुनेछ।
को भवन निर्माण सामाग्री तिनीहरूले गुणस्तर र प्रतिरोध प्रस्ताव गर्दछन् ताकि उनीहरूको निरन्तर प्रयोग र झर्ने र वारबाट पीडित नहोस्।
La रातको दर्शन घर वा व्यापार निगरानीको लागि प्रयोगहरूको एक प्लस प्रदान गर्दछ।
El द्वि-दिशात्मक अडियो जहाँसुकैबाट पनि क्यामेराको माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गर्न सम्भव बनाउँदछ।
कि आफ्नै ब्याट्री छैन प्लेसमेन्ट स्थानलाई कर्डको लम्बाइ वा प्लगमा निकटतामा सीमित गर्दछ।
यो आन्तरिक मेमोरी छैनयद्यपि यो माइक्रो USB मेमोरी कार्ड स्लटको साथ समाधान गरिएको छ।
यसको कुनै आन्तरिक मेमोरी छैन
यी होम क्यामेरा
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » यी 1080p होम क्यामेरा समीक्षा
छविहरू द्वारा गुगल कसरी खोजी गर्ने